“जति कु’टपिट गर्नु छ गर सरकार! तर सत्यको लागि म’रुन्जेल बोलिरहने छु”-अभियान्ता बब्लु गुप्ता – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“जति कु’टपिट गर्नु छ गर सरकार! तर सत्यको लागि म’रुन्जेल बोलिरहने छु”-अभियान्ता बब्लु गुप्ता
काठमाण्डौं । कुलमान घि’सिङ पुनः नियुक्त गरिनु पर्छ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अनेकौं व्यक्तिहरूलाई प्रहरिबाट दमन साथै निर्घात रुप’मा अनि मर’णासन्न रुपमा कु’ट भए’को छ । 100’S Group ले पनि शा’न्तिपूर्ण आ’न्दोलन गर्दै गर्दा प्रहरीहरुले तितरबितर बनाउँदै एक सदस्य बब्बु गुप्तामाथी नि’र्घात रुपमा कु’टपिट गरेका छन् ।
बब्लु गु’प्ता र उनका टि’मले यो महामारीको सम’यमा अनेकौं पिडामा परेकाहरुलाई खानाहरु खु’वाउँदै आएको साथै अन्य स’त्कर्म गर्दै आएको छ । सरकारले सत्कर्म कहिल्यैं देखेन तर शान्तिपूर्ण आ’न्दोलन त्यो पनि एक अशल कर्मचारी पुनः आ’उँनै पर्छ भन्दै गर्दा यु’वाहरुले प्रह’रिहरुको दमन स’हनु परेको छ ।
बब्लु गुप्ता भन्छन् ,” हामी २०४० सालको युवा हैनौं सरकार ! हामी २०७७ सा’लको हौं । तिमिहरुले दमन गर्दैमा हामी राम्रो मान्छेको पक्षमा ड’राएर आँफ्नो आ’वाज बुन्लन्द गर्न एक छोड्दैनौं ,दुई छोड्दैंनौं ,छोड्दै छोड्दैनौं । ”
गुप्ता लगायतका टिमले आ’न्दोलमा सहकार्य गर्नको निम्ति सबैलाई सुचना दिएका छन् । गुप्ताले आँफ्नो सामाजिक संजाल फेस्बुकमा युवाहरुलाई शा’न्तीपुर्ण आन्दोलनमा सहभागी जनाई पुनः कुलमा’नलाई ल्याउनको लागि दबाब दिन यसरी सुचना दिएका छन :
“सूचना सूचना “भोलि ३ बजे को’टेश्वर भक्तपुर जाने बाटाे street मा भे’टौं।आँट हारेको छैन ,जाति कुटपिट गर्नु छ गर सरकार! तर स’त्यको लागि म’रुन्जेल बो’लिरहने छु।
हाम्रो अभियान नि’रन्तर रहने छ ,हाम्रो आवाज यदि कसैले बन्द गर्न खोज्छ भने त्यो मुर्खता हो ।२०४० सालको युबा होइनौं, हामी २०७७ सालको यु’बाहरु हो। आ’न्दोलनमा सहभागी हुन हामिलाई यसमा सम्झनुहोस।
सम्पर्क नं 9861116456(Bablu Gupta),9851076042 (Saurb) ,9841466112-(Bimal Panta).Intersted can Do inbox me,comment down if your time is there or if u join.Lets make the government awake.
Previous खतिवडा आफन्त थिएर पुनः स्थान पाए तर घिसिङ कसैको आफन्तले नछुएसी बिदा भए,घिनलाग्लो राजनीति :थापा